Guddoomiye Degmo oo lagu dilay Magaalada Muqdisho iyo Wararkii ugu dambeeyay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Guddoomiye Degmo oo lagu dilay Magaalada Muqdisho iyo Wararkii ugu dambeeyay
Guddoomiyihii degmada Hodan ee Gobolka Banaadir Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun ayaa xalay lagu dilay Magaalada Muqdisho, waxaana dilkiisa laga helayaa faah faahino dheeraad ah.
Goobjoogayaal ayaa ku warramay in Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda Federaalka ay rasaas xoogan ku fureen gaariga Guddoomiye Cabdixakiin, xili uu mararay Isgoyska Jid-mareexaanka.
Wararka qaarkood ayaa sheegaya in dilka inta uusan dhicin ay is rasaaseeyn kooban dhexmartay Ilaalada Guddoomiyihii Hodan iyo Ciidamo ku sugnaa Isgoyska Jid-mareexaanka, sidaasina uu ku dhintay.
Allaha u naxariistee Guddoomiye Dhagajuun ayaa gelinkii dambe ee shalay dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho, kadib markii todobaadyadii lasoo dhaafay uu xaalad Caafimaad u jiray dalkaas markii uu ku dhaawacmay qarax lagula eegtay Muqdisho.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook ayuu ku sheegay in xaaladdiisa Caafimaad ay wanaagsan tahay, isla markaana uu bilaabay shaqadiisa, isagoo isla shalay shir Guddoomiyey shirka todobaadlaha ah ee degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag.
Hoos ka Akhriso Qoraalka uu soo saaray Guddoomiye Dhagajuun inta aan la dilin.
Haweeney sameeysay Doolsho anshax xumo ah oo si kedis ah loo xiray
Wariyeyaal caan ah oo lagu xiray Magaalada Dhuusamareeb iyo Xog laga helay